Clickfunnels များအတွက်အကောင်းဆုံးငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာ - အဆိုပါနေ့၏ကတော့
သငျသညျကိုအံ့ဩနေတယ်ဆိုရင်အရာတစျခုဖွစျသညျ clickfunnels များအတွက်အကောင်းဆုံးငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်, ဆိုက်ကအနည်းဆုံးအပေါ်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ကိုင်ဖို့လွယ်ကူသောအဖြေကိုထောက်ပံ့ 15 အွန်လိုင်းအသုံးပြုသောလူကြိုက်အများဆုံးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း.
သငျသညျအဓိကစာမျက်နှာပေါ်တွင်အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်း Apple နှင့် Android ကိုလစာအသုံးပြုသောလူကြိုက်များနည်းလမ်းများနှင့်အတူလိုက်နှင့် Stripe ဟာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ရာတွင်အသုံးပြုခံရဖို့မရရှိနိုင်ပါနိုင်ပါတယ်.
Authorize.net ထို့အပြင်သုံးနိုငျ, သင်မူကားတစ်ဦးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် var စာရွက်.
Braintree ထို့အပြင်သုံးနိုငျ. သင်ရုံပေါင်းစည်းမှုများအတွက် private key ကို generate ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
ဘဏ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ရရှိနိုင်, သင်မူကားထိုကဲ့သို့သောနှိပ်ပါဘဏ် API သော့အဖြစ်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ဖွင့်တင်ထားရန်ဘဏ်ထံမှတူရိယာများစွာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, အဆိုပါ Clerck API သော့, နှင့်ရောင်းချသူ ID ကို.
တူသောက်ဘ်ဆိုက်များ Dealguardian, Easypaydirect, ပြုတ်ရည်အပျော့, ဖက်စပ်, Ontraport, Recurly, paypal, နှင့် WarriorPlus သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် setup လုပ်ငန်းစဉ်များ, ဒါပေမယ့်သူတို့က program နဲ့အကြီးအလုပ်မလုပ်.
အောက်မှာ Filed: Clickfunnels အတူ Tagged: best payment gateway for clickfunnels